musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Rowdy Frontier Airlines Passenger Duct-Yakakwenenzverwa kuSeat
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Frontier Airlines yakaburitsa chirevo, ichipomera kuti murume uyu akarova mumwe murume anoshanda mundege uye akabata vaviri vakadzi vevashandi vekubhururuka.
Passenger aive otanga kuita hukasha uye achinyanya kurwisa murume mukomana anomubatira.
Asingadzoreki mutyairi aideedzera nezvevabereki vake kupfuma uye kuve ne $ 2 mamirioni.
Frontier yakamisa vashandi kuti dhizaini ichitapa mufambi pachigaro chake pavakasvika kuMiami.
Frontier Airlines yakatanga kuferefeta chiitiko chemuchadenga nevatakuri vasingadzoreri vakundwa nevashandi.
Vhidhiyo yemutyairi ari-kunze-kwekudzora ari kuiswa-pachigaro chake pakati pekubhururuka mushure mekufungidzirwa kurova nekubata vashandi vendege zvanga zvapararira pasocial media, uye izvo zvapa kuti ndege iyi iongorore.
Vhidhiyo iyi yakaita masaisai neChipiri sezvo yakawana nzira yayo kupinda pasocial media. Mune clip, mushandi wekubhururuka anogona kuoneka achibaya munhu pachigaro chavo, achitoisa tepi pamuromo wavo, vamwe vari mundege vachifara.
Airlines yakaburitsa chirevo nezve chiitiko ichi, ichiti murume uyu akarova mumwe murume anoshanda mundege uye akabata vaviri vakadzi vevashandi vendege.
“Panguva yendege ichibva kuPhiladelphia kuenda Miami musi waChikunguru 31, mumwe mufambi akaita hukama husina kufanira nemushandi wendege uye akabva arova mumwe anoshanda nendege, ”akadaro ndege iyi muchitauriri. "Nekuda kweizvozvo, mutyairi aifanira kumiswa kudzamara ndege yasvika kuMiami uye vatevedzeri vemutemo vasvika."
Mutakuri, Maxwell Berry, akachengetwa nemapurisa eMiami uye akatarisana nematatu ebhatiri.
Berry, ane makore makumi maviri nemaviri, anonzi akatsvaira mukombe nechekuseri kwemushandi wendege uye akazobuda muimba yekugezera asina hembe, achida kuti vashandi vamutsvakire hembe nyowani mumutoro wake. Berry akazopuruzira zvipfuva zvevakadzi vaviri uye akarova murume wechikadzi kumeso kumeso, mapurisa anodaro.
Mavhidhiyo akakurumidza uye akapararira pasocial media, nevashoma vachiratidza kunzwira tsitsi mutyairi.
Mune vhidhiyo yakaparadzaniswa inonzi ine Berry, ari kupopota nezvevabereki vake kupfuma uye kuva nemamiriyoni maviri emadhora.
Kunyangwe nerutsigiro rweveruzhinji rwevashandi vekufamba nendege, Frontier yakavamisa kuita basa rekubhururuka kudzamara kuferefetwa kuzere kuitiswa.
"Vanoshanda nendege vachange, sekudikanwa mumamiriro ezvinhu akadaro, kuzorodzwa nendege vakamirira kupedzisa kuferefetwa kwezviitiko izvi," ndege iyi yakati.